AC Contactors, Kwes ezigara, Magnetik Ebido - Jiebang
Ịmafe Capacitive Contactor
AC Contactor N'ihi Air Conditioning
Kwes bufee Relay
Air Oge Head
Inyeaka Contact Group
Jiebang ngwaahịa ihe onwunwe e ji mara
· Pure ọla kọpa eriri igwe: obere okpomọkụ ọgbọ, ogologo ọrụ ndụ, na esiri na-na voltaji bụ n'etiti 85% na 110%.
· Silver alloy kọntaktị: 4 tent nke silver alloy kọntaktị maka ukwuu ibu ebu ikike ukwuu eletriki conductivity.
· 32 iberibe sịlịkọn ígwè isi, na mmiri mụrụmụrụ, okpomọkụ dissipation bụ ike, na igwe dịghị mfe okpomọkụ a ogologo oge.
Ibe RITE URU na ogologo okwu imekọ ihe ọnụ.
Ebe ọ bụ na ya inception
ụlọ ọrụ ifịk ifịk ẹkenam mba ọzọ elu technology, na mgbe niile mma ngwaahịa na mma.
JBLE1 (09-18) Magnetik Starter
Pịnye na Signification ①Ma ...
JBH8-63 Series Ezinaụlọ AC Contactors
Ngwa iche JBHB-20/2 ...
JBA2 (LA2) Series Air Oge Head
Pịnye na Signification ① A ...
JBX9 2P Series AC Contactors N'ihi Air Conditioning
Pịnye na Signification ① C ...
JBR2 (LR2-33) Kwes bufee agba anọ
Zhejiang Jiebang Electric Co., Ltd. emi odude ke Liushi Town, na electric isi obodo center nke China, ọ bụ a collection of technology nnyocha na mmepe, n'ichepụta, ahịa na ọrụ na otu nke high- technology enterprise. The ụlọ ọrụ na-pụrụ iche na ndị prodiuction nke elu-edu na a pụrụ ịdabere contactor, kwes bufee agba anọ, magnetik Starter na ndị ọzọ na ngwaahịa, na ọgaranya mmepụta ahụmahụ na ike naakwagide ike, inye a na nso nke na-akwado ọrụ maka anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ígwè mmepụta ụlọ ọrụ na nnyefe na nkesa ụlọ ọrụ.
The Ọdịdị na ụkpụrụ nke AC Contactor
A contactor nwere ihe atọ na
banyere anyị sales netwọk kọntaktị anyị ọrụ
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.